पोखरा विमानस्थलमा जहाजमा आगो लाग्यो र धुँवाको मुश्लो देखेपछि मानिसहरु चिच्याउन थाले (भिडियोमै हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > पोखरा विमानस्थलमा जहाजमा आगो लाग्यो र धुँवाको मुश्लो देखेपछि मानिसहरु चिच्याउन थाले (भिडियोमै हेर्नुस्)
पोखरा विमानस्थलमा जहाजमा आगो लाग्यो र धुँवाको मुश्लो देखेपछि मानिसहरु चिच्याउन थाले (भिडियोमै हेर्नुस्)
admin March 18, 2021 बिजनेस, भिडियो	0
मानिसहरु आत्तिए । कसैले दमकललाई, कसैले प्रहरीलाई फोन गर्न थाले । त्यतिनै बेला साइरन बजाउँदै दमकलहरु दौडन थाले । सबैले आज एयरपोर्टमा कुनै अप्रिय घटना भएकोमा निश्चित भए जस्तो लाग्थ्यो । तर, एयरपोर्टमा कुनै पनि अप्रिय घटना भएको थिएन । हवाईजहाजको आपतकालिन उद्घार सम्बन्धी अभ्यास भइरहेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् उद्धारकर्मीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले सो अभ्यास गरेको हो । बेलुकी चार बजेपछि पोखरा एयरपोर्टमा नमूनाको रुपमा जहाज दुर्घटना गराइयो । त्यसपछि उक्त जहाजमा आगलागी पनि भयो । आगो निभाउनका लागि दमकलको सहारा लिइयो । त्यस्तै, घाइतेको उपचारका लागि एम्बुलेन्स पनि गुडे ।
यी सबै घटना नमुनाको रुपमा गरिएको थियो । अभ्यासका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसका पदाधिकारीहरु लगायत खटिएका थिए । यसको पूर्व तयारी अन्तर्गत सोमवार र मंगलवार सामान्य अभ्यास समेत भइसकेको थियो । दुर्घटना भएको खण्डमा पूर्वतयारी स्वरुप यस्तो अभ्यास गरिएको हो । यस्तै, उद्धार अभ्याससँगै चार दिने विपद् उद्धारकर्मीको क्षमता विकास तालिमको समापन गरिएको छ ।
बुवाआमाले जग्गा बेचेर बिहे गरिदिए, ८ महिनाकि गर्भवती हुँदा दाइजाेकाे नाउँमा गरियो वि’भ’त्स ह’त्या !
OMG! गुडिरहेकाे कार अनियन्त्रित भइ हाइवेबाटै यसरी उडेपछि… भिडियो सहित